भौतिक शरीर या आत्मिक मन | War Of Words Over Words…
भौतिक शरीर या आत्मिक मन
पुलमुनिको ब्यस्त सडक छेउ मैले उसलाई एक्कासी भेटें । मलाई देख्ने बित्तिकै उ खिस्स हांसी अनी अलिकती लजाएजस्तो गरी भनी “अं मैले चिंने” । चिन्नु के ठुलो कुरो भयो र ? पहिलो पटक भेट्दा अलिकती कुरा त गरेकै हो नि, त्यहां माथि वल्लो पल्लो घरमा बस्ने, पहिला कतै देखेको त थियौ होला नि ! मलाई यिनै कुराहरु भन्ने मन थियो तर केही भनिन । उ भन्दा बढी त म लजाएको थिएं । जबर्जस्ती आफ्नो हात अगाडि बढाउदै hi भनें, उ फेरी हांसी र हात मिलाई । मलाई थप लाज भयो । “कता पुगेर हो ?” मैले सोधें । “यहीं पत्तिर साथीलाई भेट्न आएको” उसले सजिलै उत्तर दिइ । “अनी तिमी कता नि ?” हठात प्रश्न गरी, शायद आफ्नो कर्तब्य पुरा गरेकी थीई होला । उ अलिकती हडबडाएको, हत्तारिएकी जस्ती देखिन्ती । मलाई के भन्ने भन्ने भयो । “अं म पनि साथीकोमा नै जान लागेको… ” मैंले ढाट्दिए । वास्तबमा त्यहां वरिपरी मेरो कोही साथी थिएन । सांझको बेला त्यो सडक बिचरण गर्नु मेरो दिनचर्या नै हो । मलाई अब उसको अगाडि उभिरहन मन लागेन अथवा मन लागेर पनि सकिन । मैंले सिधै बिदा मांगे, सम्भवत: उ पनी यही चाहन्थी होला, हामी दुई छुट्टीयौं ।
दुई चार पाइला अगाडि बढेपछी मलाई पछुतो भयो, मैले किन ढांटे । म त्यत्तिकै घुम्दै थिएं, उसगैं फर्केको भएपनी भइहाल्थ्यो नि । छेउमा राम्रै होटेल थियो, चिया खानेकी भन्न सक्थें नि । किन भनिन ? मैले केही सोचिन । एक्कासी टाउको भारी भयो । हावाभरी उसका शब्दहरु नांच्न थाले, ” अं मैले चिने “, ” अनी तिमी कता नि ? ” । आंखामा, उसको उही भ्रमित रुप भेटें । हावाका शब्दहरु कानमा एकनासले ठोक्किरहेका थिए । मनमा अघी उ निकट हुंदा देखी उब्जेको डर त्यत्तिकै थियो । आफुवरिपरी, सम्भवत: सडकभरी उ छरपस्ट छरिएकी थीइ । उसका सम्पूर्ण काल्पनिक, बिभ्रमित आकृतिहरु टिपेर नयाँ रुप बनाउने चेस्टा भयो । त्यो फगत चेस्टा थियो । पछाडि फर्केर बोलाउकी जस्तो लाग्यो, फेरी लोकाचारले के भन्ला, उसको इज्जतको पनि त सवाल थियो, मैंले आंट गरिन । पहिलो पटक उसंग बोल्न पनि मैले कागजको अर्थात सभ्य भाषामा चिट्ठीको साहारा लिएको थिएं । सभ्यता र बिकासक्रमले मान्छेलाई कहाँ बाट कहाँ पुर्याएपनी कती परिवेसमा भने यस्तै खोस्टो कागजको सहयोग लिनुपर्ने, वास्तवमै कागजको महत्व पनि यो आधुनिक भौतिक जीवनमा कत्ती कम छैन । उसलाई चिट्ठी लेख्दा भने मलाई कागजदेखी धेरै रिस उठेको थियो । एकमनले यो निर्जिव बस्तुप्रती मेरो यतिबिधी विश्वाश पलाएको देख्दा म दंग थिएं । तर लेख्दै जांदा कती कुराको अपुग जस्तो लाग्यो । यो कागजमा अनेकौं स्त्री पुरुषको सिङ्गो रुप अंटाउछ, करोडौं करोड बजेटको हिसाब अटाउछ, रत्नपार्कको सिङ्गो सभा अंटाउछ तर एउटा मान्छेको दुखी मन यसमा कहिल्यै अंटाउदैन । म उसलाई मेरो मन नै दिन चाहन्थें, मात्र विश्वासको लागि । नत्र उसले कसरी विश्वाश गरोस मेरा यि यावत बिगतलाई । बिगतमा मेरो एउटा हितेषी मित्र थीइ ” अस्मी ” । उसको बानीबेहोरा, चंन्चलेपन, कुरा गर्ने शैली मलाई साह्रै मीठा लाग्थे । उ आधुनिक जीवनकै एक अङ्ग भएपनी उसलाई आधुनिकताले कत्ती छोएको थिएन । जीवन, मर्म, प्यास, एकान्त र यो माया प्रितीलाई मैंले बुझ्नुछ; बारम्बार भनिरहन्थी । तर संसारले उसलाई केही बुझ्न दिएन, उ आफ्नो बाहुपाशको संसार पक्रन चाहन्थी, हो सायद यही थाहा पाएर होला, संसारलेनै उसलाई पहिल्यै पकडियो, अर्थात उसले यो संसार सदाका लागि छोडि । उसँग बिताएका क्षण, उसका अनेकौं तस्बिर मेरो आंखामा त्यस्तै ताजा रहेका छन जुन हिजो थिए । मलाई थाहा छ यि बिगतहरु वास्तवमा बिगत नै हुन तर पनि बिगतले बर्तमानको खुशीहरु खोसेको देख्दा मेरो भविष्य पलपल डराइरहन्छ ।
मलाई फगत यिनै कुराहरु उसको अगाडि भन्नु थियो, त्यसैले पत्रको सहारा लिएथें । अस्मी र उसको अनुहार पूर्ण रुपमा मिल्छ, प्रथमा पटक देख्दा मैले उसलाई अस्मीकै कोही नातेदार होला भन्ने सोचेथें, तर आज थाहा पाइसकें; उसले त अस्मिलाई चिन्दिन रे । उ पश्चिमकी परिछ अस्मी पुर्वकी । मैले चिट्ठीमा उसलाई सच्चा साथीको लागि प्रस्ताव गरेको थिएं, उसले हांस्दै सो स्विकारेकी थिई जुन मैले फोनमा अनुभव गरेथें । ततपश्चात उसले के सोची त्यो मलाई थाहा छैन तर जब म उसलाई देख्छु मेरो बिगत त्यत्तिकै पल्टन खोज्छ, अतितका आकृतिहरु तंछाडमछाड गर्दै अगाडि आउछन अनी म केही बोल्न सक्दिन, पूर्ण सिद्दिएको आभाष हुन्छ । यो भग्न समयमा म साह्रै दुबिधामा पर्छु र सोचिरहन्छु, ‘ मान्छेको भौतिक शरीर ठुलो या आत्मिक मन ‘ । आखिर सत्य के हो र म के खोजिरहेछु त्यो थाहा छैन फगत मेरो यात्रा जारी छ, म कुदिरहेछु कुदिरहेछु …
This entry was posted in Stories on मे 3, 2009 by Prakash.
← जिन्दगी क्रान्ति →